Google Pixel2XL ကိုစစ်ထုတ်သည် Gadget သတင်း
Google Pixel2XL ပေါက်ကြားခဲ့သည်
ဟိုဆေး Alfocea | | မိုဘိုင်း
တစ်ရက်တည်းမှာပင်ဂူဂဲလ်သည် Pixel စမတ်ဖုန်းမျိုးဆက်သစ်၏တင်ဆက်မှုနှင့်ပါတ်သက်ပြီးကောလဟာလများထွက်နေသောဂူဂဲလ်ပင်မစာမျက်နှာအပါအ ၀ င်အခြားအသစ်အဆန်းများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏သံသယအားလုံးကိုရှင်းပစ်လိမ့်မည်။
သို့သော်ထိုအခိုက်အတန့်ရောက်ရှိချိန်တွင်ကောလဟာလများနှင့်ပေါက်ကြားမှုများများပြားလာပြီးလူကြိုက်များသောအီဗန်ဘလပ်စ်မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောပုံရိပ်များစွာကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဂူဂဲလ် Pixel2XL တွင်အသစ်နှင့်ထင်မြင်ချက်အရကြည့်ပါ.
LG G2 နှင့်ဆင်တူသည့် Google Pixel6XL
လူမှုရေးကွန်ရက်တွစ်တာတွင်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များမှတစ်ဆင့် Blass မှပေါက်ကြားခဲ့သည့်ပုံရိပ်များအရ Google Pixel2XL သည်ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲတို့တွင်ပါတီထွင်မှုများကိုဆောင်ကျဉ်းပေးလိမ့်မည်.
ယိုစိမ့်သောပုံရိပ်တစ်ခုတွင်၎င်းကိုစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်သတိပြုရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းအသစ်၏ရှေ့နှင့်နောက်ဖက်နှစ်မျိုးလုံးကိုမြင်နိုင်သည်။ 18:9ရှုထောင့်အချိုး display ကိုLG G6 ကဲ့သို့ Samsung Galaxy S18,5 ၏ ၁၈.၅: ၉ နှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။
ဤမျက်နှာပြင်သည်အကာအကွယ်ပေးထားသောမျက်နှာဖုံးတစ်ခုလုံး၏အများစုကိုယူထားသည် Frameless design နီးပါး သို့သော်လက်ရှိစမတ်ဖုန်းများတွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်၊ မျက်နှာပြင်၏အနားမရှိကြပေ ကွေး ဒါကြောင့်သိသာထင်ရှားသောဆင်တူပေမယ့်, က LG G6 နဲ့အကွာအဝေးခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။
ကျောဘက်မှာတော့ Google Pixel2XL ထွက်ပေါ်လာတယ် ကင်မရာနှစ်လုံးမရှိပါသို့သော်ယနေ့ခေတ်အထိကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသောကောလာဟလဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမအံ့သြသင့်ပါ။
သို့သော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆုံးအဘယ်သို့သောအဖြစ်ပါတယ် ယခု application application dock icon အောက်ရှိ Google search bar ၏အနေအထားအသစ်။ သံသယမရှိဘဲ, ဤတည်နေရာ၏ရွေးချယ်မှုမည်သည့်စိတ်ကူးများကြောင့်မဟုတ်ပါနှင့်သူက၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုပြင်းထန်လာရန်အလိုဆန္ဒကြောင့်ကြောင်းယူဆ။
Google Pixel2XL အသစ်ကိုသင်ဘယ်လိုမြင်သနည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Google Pixel2XL ပေါက်ကြားခဲ့သည်
Manolo Lama သည်အသက်ရှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင် FIFA World Cup 2018 ရှိလိမ့်မည်